Vaovao - Famaritana ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny fampiharana azy avy amin'i RICK LEBLANC
Famaritana ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny fampiasana azy avy amin'i RICK LEBLANC
Ity no lahatsoratra voalohany amin'ny andian-dahatsoratra misy fizarana telo nataon'i Jerry Welcome, izay filohan'ny Fikambanana Reusable Packaging Association. Ity lahatsoratra voalohany ity dia mamaritra ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny anjara andraikiny amin'ny rojom-panomezana. Ny lahatsoratra faharoa dia hiresaka momba ny tombony ara-toekarena sy ara-tontolo iainana amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray, ary ny lahatsoratra fahatelo kosa dia hanome masontsivana sy fitaovana hanampiana ireo mpamaky hamantatra raha mahasoa ny fanovana ny fonosana fitaterana indray mandeha na voafetra ampiasaina amin'ny orinasa iray. mankany amin'ny rafitra famonosana fitaterana azo ampiasaina indray.
Ireo retable voadio dia manatsara ny fahombiazan'ny lozisialy
Reusables 101: Famaritana ny fonosana fitaterana azo ampiasaina sy ny fampiharana azy
Fonosana fitaterana azo ampiasaina azo faritana
Tao anatin'ny tantara vao haingana, orinasa maro no nanaiky ny fomba hampihenana ny fonosana voalohany na farany. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ireo fonosana manodidina ny vokatra ihany, ny orinasa dia nampihena ny angovo sy ny fako lafo. Ankehitriny, ny orinasa dia mandinika ihany koa ny fomba hampihenana ny fonosana ampiasainy amin'ny fitaterana ny vokatra. Ny fomba mahomby indrindra sy mahomby indrindra hahatratrarana an'io tanjona io dia ny fonosana fitaterana azo ampiasaina.
Ny Reusable Packaging Association (RPA) dia mamaritra ny fonosana azo ampiasaina indray ho toy ny paleta, kaontenera ary dunnage natao hampiasaina indray ao anatin'ny rojom-pivarotana. Ireo entana ireo dia namboarina ho an'ny dia maro sy fiainana lava. Noho ny toetrany azo ampiasaina indray dia manome fiverenana haingana amin'ny fampiasam-bola izy ireo ary vidiny ambany isan-dia lavitra noho ny vokatra fonosana tokana ampiasaina. Ho fanampin'izany, izy ireo dia azo tehirizina tsara, hokarakaraina ary zaraina manerana ny rojom-panomezana. Azo isaina ny sandany ary voamarina amin'ny indostria sy ny fampiasana maro. Androany, ny orinasa dia mijery fonosana azo ampiasaina indray ho vahaolana hanampiana azy ireo hampihena ny vidiny ao amin'ny rojo famatsiana ary koa hahatratra ny tanjon'izy ireo maharitra.
Ny paleta sy kaontenera azo ampiasaina azo ampiasaina, matetika vita amin'ny hazo maharitra, vy, na plastika na votoaty voajanahary, (mahatohitra ny akora simika sy ny hamandoana miaraka amin'ny fananana miaro tsara), dia natao mandritra ny taona maro ampiasaina. Ireo kaontenera matanjaka sy mando hamandoana dia natsangana mba hiarovana ny vokatra, indrindra amin'ny tontolon'ny fandefasana entana.
Iza no mampiasa fonosana azo ampiasaina?
Karazan'orinasa sy indostria marobe amin'ny famokarana, fikirakirana fitaovana, ary fitehirizana sy fizarana no nahita ny tombony azo avy amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina. Ireto misy ohatra:
· Mpanamboatra herinaratra sy mpanangona solosaina
· Mpamokatra faritra mandeha amin'ny fiara
· Zavamaniry fivorian'ny otomotif
· Mpanamboatra fanafody
· Karazana mpanamboatra maro hafa
· Mpanamboatra sy mpaninjara sakafo sy zava-pisotro
· Mpamokatra hena sy akoho amam-borona, mpanodina sy mpaninjara
· Mamokatra mpamboly, fanodinana ary fizarana
· Mpamatsy enta-mavesatra amin'ny fivarotan-mofo, ronono, hena ary vokatra
· Fanaterana mofo sy ronono
· Mpanamboatra vatomamy sy sôkôla
Fitsinjarana ny vokatra antsinjarany sy ny mpanjifa
· Rojo fivarotana
· Superstores sy fivarotana club
· Fivarotam-panafody fivarotana
· Mpizara boky sy gazety
· Mpivarotra sakafo haingana
· Mpivarotra sy mpamatsy trano fisakafoanana
· Orinasa mikarakara sakafo
· Mpamatsy fiaramanidina
· Mpivarotra faritra
Faritra maro manerana ny faritry ny famatsiana no afaka mahazo tombony amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray, ao anatin'izany:
· Famoahana entana: entam-barotra na zana-kazo madinidinika nalefa tamina orinasa mpanodina na fivoriambe, toy ny mpitroka hatairana izay alefa amina toeram-pivarotana automotika, na lafarinina, zava-manitra na akora hafa nalefa tamina mpivaro-mofo lehibe.
· Ny asa ao anaty zavamaniry na ny kaontenera am-pandehanana: Ny entana nifindra teo anelanelan'ny toerana fivorian'ny na fanodinana ao anaty zavamaniry iray na nalefa teo anelanelan'ny zavamaniry tao amin'ilay orinasa iray ihany.
· Entana vita: Fandefasana entana vita amin'ny mpampiasa na mivantana na amin'ny alàlan'ny tamba-jotra fizarana.
· Fizarana serivisy: "Aorian'ny tsena" na ny fanamboarana entana alefa any amin'ny ivon-toerana, mpivarotra na foibe fitsinjarana avy amin'ny orinasa mpamokatra.
Fandroana paositera sy kaontenera
Ny rafitra mihidy-loop dia mety amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray. Ireo kaontenera sy paleta azo ampiasaina azo ampiasaina dia mivezivezy manerana ny rafitra ary miverina foana amin'ny toerana nanombohany (lozisialy mihodina) hanombohana ny fizotrany manontolo indray. Ny fanohanana ny lozisialy mifamadika dia mitaky fanodinana, loharano ary fotodrafitrasa hanarahana, hitadiavana ary hanadio ireo kaontenera azo ampiasaina indray avy eo ary hanaterana azy ireo any am-piandohana hampiasaina indray. Ny orinasa sasany dia mamorona fotodrafitrasa ary mitantana ny fizotrany manokana. Ny hafa misafidy ny hanome ny lozisialy. Miaraka amin'ny paleta sy ny fitahirizana kaontenera, ny orinasa dia mamoaka ny lozisialy ny pallet sy / na ny fitantanana kaontenera amin'ny serivisy fitantananana antoko fahatelo. Ireo serivisy ireo dia mety misy ny fanangonana, ny lozisialy, ny fanadiovana ary ny fanarahana ny fananana. Ny paleta sy / na kaontenera dia atolotra an'ireo orinasa; ny vokatra dia alefa amin'ny alàlan'ny rojom-panolorana; avy eo ny serivisy fanofana dia maka ireo paleta sy / na kaontenera poakaty ary mamerina azy ireo any amin'ny ivon-toerana hijerena sy hanamboarana azy ireo. Ny vokatra fanangonana matetika dia vita amin'ny hazo avo lenta, mateza, metaly na plastika.
Rafitra fandefasana loop-open matetika dia mitaky ny fanampian'ny orinasa mpitantana dobo filaminan'ny antoko fahatelo mba hanatanterahana ny fiverenana sarotra kokoa amin'ny fonosana fitaterana poakaty. Ohatra, ny kaontenera azo ampiasaina indray dia mety halefa avy amin'ny toerana iray na maromaro mankany amin'ny toerana samihafa. Orinasa mitantana dobo manangana tambajotra fanamoriana hanamorana ny fiverenan'ireo fonosana fitaterana azo ampiasaina azo foana. Ny orinasam-pitantanana dobo dia mety manome serivisy isan-karazany toy ny famatsiana, fanangonana, fanadiovana, fanamboarana ary ny fanarahana ny fonosana fitaterana azo ampiasaina. Ny rafitra mahomby dia afaka mampihena ny fatiantoka sy manatsara ny fahombiazan'ny rojom-panomezana.
Amin'ireto fampiharana azo ampiasaina ireto dia avo lenta ny vokatra fampiasana renivohitra mamela ny mpisera farany hahazo tombony amin'ny fampiasana indray raha mampiasa ny renivohiany ho an'ny asa aman-draharaha ifotony. Ny RPA dia manana mpikambana maro izay manana sy manofa na manangona ny fananany azo ampiasaina.
Ny toetr'andro ara-toekarena ankehitriny dia mitohy manosika ireo orinasa hampihena ny vidiny raha mety. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny fampahafantarana manerantany fa ny orinasa dia tsy maintsy manova ny fomba fanao izay manaparitaka ny harena eto an-tany. Ireo hery roa ireo dia miteraka orinasa maro kokoa mihinana fonosana azo ampiasaina indray, sady vahaolana amin'ny fampihenana ny vidiny sy amin'ny fampandehanana ny faharetan'ny rojom-pamokarana.
Fotoana fandefasana: Mey-10-2021